Baro xeebaha ugu fiican ee loo yaqaan nudist-ka Almería | Wararka Safarka
Xeebaha Nudist ee Almería ee ay tahay inaad booqato
Susana Garcia | | Almería, Xeebaha
Almería waxay u ahayd dalxiis xagaaga muddo tobanaan sano ah Xeebaheeda waxaan ka helnaa qaar ka mid ah xeebaha ugu wanaagsan Spain oo dhan. Layaab ma leh in iyaga dhexdooda ay jiraan xeebo qaawan oo ay ugu jecel yihiin martida. Waxay leedahay xeeb dhererkeedu dhan yahay 250 kiiloomitir sannado yarna waxay ka mid ahayd meelaha ugu caansan ee loo tago dadka dabiiciga ah, Spain kuma koobna oo keliya laakiin Yurub oo dhan. Nudism wuxuu ka yimid Jarmalka wuxuuna ku haray xeebaheena, isagoo maanta ah wax aad u dabiici ah, sidaa darteedna ay jiraan xeebo u gaar ah.
Aynu ka hadalno qaar ka mid ah xeebaha ugu fiican ee loo yaqaan 'nudist' ee laga heli karo Almería. Haddii aad rabto inaad ka bilowdo adduunka qaawinta, waxaad booqan kartaa qaar ka mid ah jannooyinkan oo iyaguna ah aagag ciid ah oo aad ku raaxeysan karto oo aad ku baashaalo karto. Ha iloobin inaad ku raaxeysato waayo-aragnimadan xeebaha Almería.
1 Xeebta Vera
2 Xeebta Dhimashada
3 Xeebta Genoveses
4 Xeebta Mónsul
5 Xeebta Barronal
Haddii aan tagno ka hadal qaawinta Almería shaki la'aan waa inaad ka hadashaa Vera Beach. Xeebo badan ayaa loo oggol yahay in lagu sameeyo qaawan ama la isticmaalo suuliga, laakiin kuwa kale waxaa loo oggol yahay oo keliya in lagu sameeyo naturism maxaa yeelay waa ku gaar. Xeebta Vera waa mid ka mid ah xeebaha dabiiciga ah ee aan la oggoleyn isticmaalka dharka dabaasha, waana taas sababta ay u noqotay mid ka mid ah meelaha loogu booqashada badan yahay ee qaawinta. Xaqiiqdii, xeebta agteeda waxaa jira magaalooyin qaawan oo dadka degani u horseedi karaan nolol gebi ahaanba caadi ah oo ka baxsan xeebta inta ay ku dhaqmayaan qaawanaanta. Xeebtan ayaa dhererkeedu yahay hal kiiloomitir oo aaggan waxaan ka heli karnaa hudheelka kaliya ee dabiiciga ah ee ku yaal Spain, Vera Playa Club.
Xeebtaan Waxay ku taalaa Beerta Dabiiciga ah ee Cabo de Gata waana mid ka mid ah kuwa ugu caansan Almería. Waxay ku taal degmada Carboneros meel fog, maaddaama xeebta 1600-mitir ay ku taal bartamaha aagga dabiiciga ah, oo ah meel qurux badan oo u muuqata inaan la nadiifin. Waxaa jira dhowr wadiiqo oo loo maro xeebta laakiin si aan halkaas u gaarno waa inaan soconaa, sidaa darteed waxaa lagugula talinayaa inaadan qaadin waxyaabo badan. Laguma talin dadka leh dhaqdhaqaaq yar laakiin dhab ahaan waa u qalantaa safarka. Waa xeeb aad ku sameyn karto qaawanaan laakiin sidoo kale isboorti sida snorkeling oo ay ugu mahadcelinayaan biyaheeda cad.
Kani waa mid kale oo ka mid ah xeebaha ku yaal jardiinada dabiiciga ah oo ay caan ku yihiin dalxiisayaasha adduunka oo idil. Waxay ku taalaa hareeraha badda waxayna leedahay oo leh ciid wanaagsan oo dahabi ah oo siisa muuqaal aan fiicnayn, maaddaama ay jirto aag leh godad yaryar. Waqooyiga waxaa ku yaal kayn yar oo qorraxda laga gabadsado, taasoo ka dhigaysa xeeb ku habboon in lagu qaato maalinta oo dhan. Intaas waxaa sii dheer, biyaheeda waa kuwo deggan. Waxay leedahay degitaan aad u sarreeya waxayna ahayd wax caadi ah in dadka lagu arko iyagoo sameynaya qaawan xeebta oo dhan, in kasta oo aysan qasab ahayn haddana maalmahan badiyaa waxay ku badan tahay woqooyiga.
Xeebtan ayaa caan ku ah inaad ku jirto mid ka mid ah filimada 'Indiana Jones', laakiin sidoo kale waa mid ka mid ah meelaha ugu ciidda badan Almería halkaas oo aad sidoo kale ku sameyn karto qaawanaan. Dhererkeedu waa 400 mitir oo keliya sidaa darteed badanaa waxaa lagu buuqaa xilli sare. Waxay u taagan tahay qaab dhismeedkeeda dhagaxda asal ahaan volcanic iyo aagga dunta weyn.
Laga soo bilaabo xeebta Mónsul waxaad booqan kartaa xeebta Barronal ee ku teedsan xeebta. Laga soo bilaabo aaggeeda bari waxaan ku socon doonnaa xeebta illaa aan marka hore ka gaarnay barronal cove ka dibna xeebta. Xeebtan ayaa labo jibbaar ka badan Mónsul waana xeeb si qaawan loo yaqaan. Waxay leedahay marin fudud oo ka mid noqoshada xeebaha ugu caansan way fududahay in la soo booqdo Waxay caan ku tahay qaawinta dadka kale sida Mónsul ama Los Genoveses haddii aan rabno inaan helno meel leh jawi qaawan.
Kuwaas hel meel caqli badan oo lagu sameeyo qaawinta oo laga yaabee inaysan caan u ahayn sida xeebaha kale waa Cala del Plomo. Cove yar oo kuyaala inta udhaxeysa meelaha dhagaxa leh kana fog dadka. Cove-kan ayaa dhererkiisu yahay laba boqol oo mitir oo keliya, sidaa darteed nama siinayo meel badan, laakiin waxaa ku hareeraysan qaab dhismeedka dhagaxa volcanic, taas oo siinaysa taabasho qarsoodi ah oo aysan kuwa kale haysan Dhinaca kale, waa xeeb qurux badan oo leh ciid dahab ah iyo biyo aad u qurux badan oo qurxoon oo kugu martiqaadaya inaad quusato oo aad dabbaasho saacado. Laga soo bilaabo qashinkaan waxaan ka heli karnaa kuwa kale ee dhow sida Cala de En Medio, halkaasoo aad sidoo kale ku sameyn karto qaawanaan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka Safarka » safarka » Xeebaha » Xeebaha Nudist ee Almería ee ay tahay inaad booqato
Noocyada dalxiiska Spain